Nest Ime Ụlọ Azụmahịa - Imewe Mmewe
Ime Ụlọ Azụmahịa
Ime Ụlọ Azụmahịa Ala a na-ekekọrịta site na ndị ọkachamara abụọ pụrụ iche- ndị na-akwado ma na-ese ụkpụrụ ụlọ nke na-akpọ iwu dị iche iche. Nhọrọ na ịkọwa ihe dị iche iche bụ mgbalị iji mee ka ihe niile dị na mbara ala, ọhụụ na iji wee tụgharịa ọrụ nka na ihe ụlọ. Ngwakọta na ntinye nke ihe ndị dị na gburugburu ebe obibi, nha mepere emepe, a chụpụrụ ha niile site na icheta obodo ihu igwe iji mee ka gburugburu ebe obibi kwenye na mmeghachi omume furu efu ọnụ na-eme ka usoro mmegide dịgide.
Aha oru ngo : Nest, Aha ndị na-emepụta ya : Neogenesis+Studi0261, Aha onye ahịa : Neogenesis+Studi0261.
Ime Ụlọ Azụmahịa Neogenesis+Studi0261 Nest